တို​တို​ထွာ​ထွာ ​အ​ဖြေ​များ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
≡Main Menu Bar
ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
W w W. N y I n @ y M i N. o R g
Mg. Chit Soe: How to open APYTZ Dj by manual start. I mean I want to listen the song by manual.
​ကို​မောင်​ချစ်​စိုး​ရေ ​ကျွန်​တော်​တို့​အ​နေ​နဲ့ apytz.net ​ရဲ့ radio ​ကို manual ​အ​နေ​နဲ့ ​ဖွင့်​လို့​မ​ရ​ပါ​ဘူး .. ​အဲ့​ဒါ online radio ​ပါ ​သူ​တို့ ​လွှင့်​သ​မျှ​ကို​ပဲ ​ကျွန်​တော်​တို့​က ​နား​ထောင်​လို့​ရ​မှာ​ပါ . ​ဒါ​ရိုက်​လွှင့်​ပေး​တာ​ဖြစ်​လို့ ​အစ်​ကို​ပြော​သ​လို manual ​ဖွင့်​လို့​မ​ရ​နိုင်​ပါ​ဘူး . ​ကျွန်​တော်​တို့ bbc, boa ​တို့​လို online radio ​တစ်​ခု​ပါ​ပဲ ..
​အာ​ကာ: CAT CDMA ​ပါ ​ဘတ်၇၉၀​ဝ ​တောင်​ပေး​ရ​တယ်​အ​ကို​ရ​မ​ကောင်း​ဘူး​ဖြစ်​နေ​တယ်
​ပြော​ပြ​ပေး​ပါ​ဦး​ဘာ​ကြောင့်​လဲ​ဆို​တာ​ဝယ်​ထား​တာ​က 3mbs​ကို​ဝယ်​ထား​တာ​ပါ ... ​လိုင်း​က​ဒေါင်း​လု​လုပ်​တာ​တောင်​အ​ရမ်း​ကြာ​နေ​တယ် ...
​အ​ကြံ​ပေး​ချင်​တာ​က CDMA ​တိုင်​ထောင်​ပြီး​မှ ​သုံး​ပါ . ​သူ့​မှာ​ပါ​တဲ့ ​လက်​ညိုး​လောက် ​တိုင်​လေး​နဲ့ ​ဖြစ်​ညှစ်​ပြီး ​မ​သုံး​ပါ​နဲ့ speed ​က ​ပို​နှေး​သွား​မှာ​ပါ . ​ဖုန်း​တိုင် ​တစ်​တိုင်​ကို 1500 ​လောက်​ရှိ​ပါ​တယ် . ​ကျွန်​တော်​တို့ TV ​တိုင်​လို​ပါ​ပဲ . ​အဲ့​ဒီ့​တိုင်​က​နေ ​ကြိုး​တစ်​ချောင်း​ရ​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် . ​အဲ့​ဒီ့​ကြိုး​ရှိ​တဲ့ ​တိုင်​ကို​ထောင်​တဲ့​အ​ခါ​မှာ​လဲ ​ခပ်​နိမ့်​နိမ့်​လေး​ထောင်​ရင် ​လိုင်း​အား​သိပ်​မ​ကောင်း ​ပါ​ဘူး . ​မြင့်​နိုင်​သ​မျှ​မြင့်​လိုက်​ပါ . ​တိုင်​ထောင်​နေ​တုန်း cdma ​မှာ ​လိုင်း​အား​ကို​ကြည့်​ပါ . ​ဘယ်​နှစ်​တုံး​အ​ထိ ​မိ​နေ​လဲ​လို့​ပါ . ​အ​နည်း​ဆုံး4​တုံး​နှင့် ​အ​ထက် ​မိ​မှ​သာ Download speed ​ကောင်း​မှာ​ပါ . ​မ​ဟုတ်​ရင် Download ​လုပ်​တာ ​ရပ်​ရပ်​နေ​တတ်​ပါ​တယ် .
​ကို​မင်း​ထက်: ​အ​ကို​ရေ pdf creator ​လေး​ရဲ့ ​ကီး​လေး​ရှိ​ရင်​တင်​ပေး​ပါ​လား
​ကို​မင်း​ထက်​ရေ ​ဒီ​မှာ ​ကျွန်​တော်​ပေး​ထား​ပြီး​သား​ပါ . ​အဲ့​ကောင်​လေး​လဲ​ကောင်း​ပါ​တယ် . pdf ​နဲ့ ​ပတ်​သက်​လို့ ​နဲ​နဲ​ရှာ​ကြည့်​လိုက်​ပါ . ​ကျွန်​တော် ​တင်​ပေး​ထား​ပါ​တယ် . word ​ကို pdf ​ပြောင်း​တဲ့ program ​က ​အ​စ ​တင်​ပေး​ထား​ပါ​တယ် ..
​ဝါ​ကြီး: ​ကို​ညီ..blogspot ​ရဲ့posting page ​မှာ ​ဓါတ်​ပုံ​တွေ ,​ဗွီ​ဒီ​ယို ​တွေ ​ထည့်​တဲ့ menu line ​ပျောက်​နေ​လို့.​ကူ​ညီ​ပါ​ဦ
menu tab ​လုပ်​ပုံ​လုပ်​နည်း​ကို ​သေ​ချာ​နား​လည်​အောင် ​သွား​ဖတ်​ပြီး​တော့ ​ပြန်​လုပ်​လိုက်​ပါ . ​လွယ်​ပါ​တယ် . ​ဒီ​ကို ​သွား​လိုက်​ပါ ..
Android phone ​များ​အ​တွက် Zawgyi Keyboard and Font
​ကဲ ​လို​ချင်​တဲ့​သူ​များ ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​ယူ​နိုင်​ပါ​တယ်။ ​ဖုန်း​ထဲ​က​နေ ​ချက်​တင်​ချက်​လို့​ရ​သ​လို၊ ​ဖုန်း​ထဲ​က​နေ ​ဘယ်​ဝဘ်​ဆို...
Windows ကို5မိနစ်လောက်နဲ့ အကုန်ဘယ်လို တင်မလဲ (သင်ခန်းစာ)
ဒီနေ့ညတော့ ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာကနေ လက်တွေ့ video record ပေးမလို့ပါ။ ဗိုက်ကလည်းအောင့်နေတာနဲ့ .. ကတိကလည်း ပေးထားပြီးပြီဆိုတော့ ဖြစ်အောင်တင်ေ...
IDM နောက်ဆုံးထွက်ထားတာလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. တစ်ချို့ Firefox နဲ့ version မကိုက်တော့ IDM CC add-ons မ၀င်ဘဲနဲ့ Download ဆွဲမရတာတွေ ဖြစ်တ...
Lynda.com InDesign CS5.5 New Features
​ပ​ထ​မ​အ​စ​က ​တင်​ပေး​တာ​က CS5 New Features ​ပါ ​အ​ခု​က CS5.5 New Features ​ပါ။ Version ​မ​တူ​ပါ​ဘူး။ CS5 ​မှာ ​မ​ပါ​တဲ့ ​အ​ကြောင်း​တွေ​ကို ...
gtalk ​တွင် zaw gyi font ​မ​ပေါ်​ခြင်း ​ပြ​ဿ​နာ​အ​ဖြစ်​အ​များ​ဆုံး​က IE ​က
yu yu ; nyima computer ka dell amyoo asar(2010-japan version)par...athi ama 1 yout ka myanmar font ko read loe ya aung. write loe ya aung...
Antivirus မြား Download လုပျနညျး Bitdefender 2014 All version GData Antivirus 2014 AVG All Version 2014 Outpost Security Suite Pro V:8.1.2 Avast Internet Security 2014 v9.0.2013 Avast Internet Security 2014 v9.0.2013 KIS 2013 and KIS 2014 KAV 2013 KIS 2013 Zone Alarm Pro Firewall v12.0.104 Norton Antivirus 2013 v20.1.24 ESET NOD32 Antivirus and Sart Security 6.0.308 AVG Internet Security 2013 avira internet security 2013 Avast Internet Security 2013 SMADAV 2013
Operating System မြား Window 8.1 Preactive Version Window 8 Professional (32 x64) Window 8 Professional (64 Bit) Window7Ultimate May 2013 Activated (64 bit) Window7Ultimate May 2013 Activated (32 bit) Window7(32 x64) Window xp Black Edition Windows XP Pro SP3 May 2013 Ubuntu 12.04.1 (32 x64)(Latest version) Ubuntu 12.04.1 (32 x64) Mac OS X Lion 10.7.4 Final
နညျးပညာဆိုငျရာစာအုပျမြား Adobe product စာအုပျမြား Computer ဆိုငျရာစာအုပျမြား Graphic စာအုပျမြား O/S ဆိုငျရာစာအုပျမြား Graphic စာအုပျမြားစုစညျးမှု Networking ဆိုငျရာစာအုပျမြား Website ရေးသားခွငျးဆိုငျရာစာအုပျမြား Programming ဆိုငျရာစာအုပျမြား Internet အသုံးခနြညျးလမျးညှနျစာအုပျမြား ဓာတျပုံ/ဗှီဒီယိုတညျးဖွတျခွငျးဆိုငျရာစာအုပျမြား Adobe Product Ebooks C++ Ebooks Linux, Android အသုံးပွုနညျးလမျးညှနျ Mix Collection Ebooks (1) Mix Collection Ebooks (2)
Lynda လကျတှသေ့ငျခနျးစာဗှီဒီယိုမြား InDesign CS5 Essential Training InDesign CS5.5 New Features InDesign CS5 to EPUB,Kindle and iPad indesign cs5 collaborative workflows and incopy InDesign CS5 Interactive Documents and Presentations Indesign CS5 Dynamic Publishing workflows in xml InDesign CS5 Print Production Guidelines Adobe Indesign CS5 New Features
Adobe Photoshop Tutorial (မြန်မာလို) (4)
Blog and Html (121)
Download ​လုပ်​နည်း​များ (16)
File ​ပြန်​ဖြေ​မည့် ​နည်း​လမ်း​များ (4)
Online ​သင်​ခန်း​စာ​သင်​တန်း video (14)
Tutorial Videos (5)
Upload ​လုပ်​နည်း​များ (2)
Ram ​ကို 512+1G ​စိုက်​လို့​ရ​ပါ​သ​လား
audio ​လား video ​လား
​အိုင်​တီ​ခ​ရီး​သည်: ​ကို​ညီ​ရေ.. ​တစ်​ခု​လောက်​မေ...
Local area connection ​မ​ပေါ်​ရင် ​ဘယ်​လို​လုပ်​မ​လ...
Printer ​မှာ ​သတ်​မှတ်​ထား​တဲ့ ​စာ​ရွက်​ရေ ​ကုန်​ဆ...
How to make New window
Adminstrator account ​နဲ့ ​ပြန်​ဝင်​ချင်​ရင် ​ဘယ်​...
Adobe Photoshop Tutorial (မြန်မာလို)
Blog and Html
File ​ပြန်​ဖြေ​မည့် ​နည်း​လမ်း​များ
Online ​သင်​ခန်း​စာ​သင်​တန်း video
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၃)ရက်နေ့တွင် Blog အား ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ပြန်လည်ပြီး စတင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။
All Tutorial Posts By ညီနေမင်း(နည်းပညာ) | Learn more Lessons on Nyi Nay Min